ွGameနဲ့လူငယ်ဘ၀ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology »ွGameနဲ့လူငယ်ဘ၀
Posted by zeo on Jul 20, 2010 in Computers & Technology, Hobbies & Games, Know-How, DIY |2comments
လူအများစုက ဂိမ်းကစားခြင်းဟာ ကောင်းကျိုးမပေးဘူးလို့ပြောကြတယ်…ဒါကိုကန့်ကွက်သူတွေမှ အများကြီးပဲလေ..ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့… အသက်၁၈အောက်ကလေးတွေကအများဆုံးပေါ့…သူတို့ကဂိမ်းကိုထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့အသုံးချကြတယ်…မယုံရင်မေးကြည့်လေ…မင်းတို့ဂိမ်း ဆော့ဘာများကောင်းလဲလို့?…ရိုးရိုးတန်းတန်းပဲမေးနော်…မဟုတ်ရင်ခင်ဗျားကို ရန်သူတစ်ယောက်လိုဆက်ဆံလိမ့်မယ်ဗျ…မယုံရင်မရှိနဲ့.. ဒါကျွန်တော့်ကိုယ်တွေ့ပဲ…(ဒီအကြောင်းကိုတော့ နောက်မှသီးသန့်ရေးတော့မယ်ဗျာ…)ပြောချင်တဲ့အကြောင်းက ဂိမ်းဆိုတာအခုလို ITခေတ်မှာ လူငယ်တွေရဲ့အဓိကထွက်ပေါက်တစ်ခုပဲဗျ…PS1,PS2 ဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခေတ်စားခဲ့ပါတယ်(သုတို့ထက်အရင် family game လေးတွေ ပေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်)…အခုဆိုရင် Nintendo,PS3,X-box,PC Gameတွေခေတ်စားလာပါတယ်…တိုးတက်လာတဲ့နည်းပညာထဲမှာ လူငယ်တွေအတွက် ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးပါဖြစ်လာပါတယ်…ပြောချင်တာကတော့ လူကြီးတွေအနေနဲ့ အလွန်အကျွံ မတားမြစ်ဖို့ပါပဲ… တားလို့လည်းရမှာမဟုတ်ပါဘူး…တချို့တွေက ဂိမ်းဆော့ပြီဆိုရင် အဲဒီလူကိုနှာခေါင်းရှူံ့ချင်ကြတယ်…ဘာဖြစ်လဲဗျာ…လူငယ်ပဲ…အဲဒီလိုမှမဟုတ်ရင် ကျွန်တော့်တို့ဘာလုပ်ရမှာလဲ? စိတ်အပန်းဖြေဖို့အတွက် အရက်သောက်ရမှာလား?ဆေးခြောက်ရှူရမှာလား?…နည်းနည်းလေးစဉ်းစားပေးကြပါလို့…
ဆေးသမား၊အရက်သမားထက်တော့ အများကြီးသာပါတယ်ဗျာ…စိတ်မချဘူးဆိုရင်လည်း ဘေးကနေ ထိန်းသိမ်းပေးပေါ့…. နောက်ဆုံး ပြောချင်တာက စာရေးသူကိုယ်တိုင် Gamer တစ်ယောက်ပါ…ကျွန်တော်အသက်(၂၀)ရှိပြီင်္…အခုချိန်ထိ အရက်၊ဆေးလိပ်၊မူးယစ်ဆေးဝါး၊ကွမ်း မသုံးစွဲဘူးပါဘူး…နောက်လည်းသုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး…ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်မှာ Second life ရှိနေပြီလေ…အဲဒါကတော့ Game ပဲ…Game ကလူဘ၀ကိုစိုးမိုးစေတယ်ဆိုတာ….မဖြစ်နိုင်ပါဘူး…ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူတစ်ယောက်မှာ စိတ်ကသာအရေးကြီးဆုံးပါ…… ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်သာ ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ပဲလိုပါတယ်…ကျွန်တော့်လူငယ်ဘ၀အချိန်တော်တော်များများကို Gameနဲ့ပဲကုန်လွန်ခဲ့တာပါ….PC Game တော်တော်များများဆော့ခဲ့ဖူးပါတယ်…Gameကြောင့်ပဲအထီးကျန်ခဲ့သလို…Gameကြောင့်ပဲကျွန်တော့်တိုးတက်ခဲ့ပါတယ်(နောက်များမှ သီးသန့်ရေးပါတော့မယ်)… နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောချင်တာက လူငယ်တွေgame ဆော့တာကိုအပြစ်မမြင်စေချင်ပါဘူး…ဒါသူတို့ဘ၀ပဲ… စည်းကမ်းတကျထိန်းသိမ်းတတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။
zeo leo has written 1 post in this Website..
View all posts by zeo →
zeo ရဲ့ အဆိုကို ထောက်ခံပါတယ်။ ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ယနေ့အထိ ဂိမ်းဆော့နေဆဲပါ။ ဂိမ်းဆော့ခြင်းအားဖြင့် ဥာဏ်ထက်မြက်သလို အရိပ်ပြရင် အကောင်မြင်တတ်ပါတယ်။ တချို့ကပြောပါတယ်။ ဂိမ်းစွဲတတ်တယ်တဲ့။ ကျနော့်အတွက်တော့ မမှန်ပါဘူး။ ရှိရင်ဆော့တယ်။ မရှိရင်လည်း မဆော့ပဲ နေနိုင်ပါတယ်။ ယနေ့ထက်ထိ ကောင်းကျိုးတခုအဖြစ် ခံယူထားတာကတော့ ဘာမူးယစ်ဆေးဝါးကိုမှ မသုံးဖြစ်ခဲ့၊ မသုံးတတ်ခဲ့တာ ဂိမ်းဆော့ခြင်းကြောင့်လို့ ယုံကြည်ထားမိတာပါပဲ။ ဘာမဆို တန်ဆေး၊ လွန်ဘေးတော့ ရှိမြဲပါပဲ။
မှန်ပါတယ် ဘယ်အရာမဆိုလွန်ကဲစွာ ဆိုတဲ့ အစွန်းတရားကိုလွတ်အောင်ရှောင်နိုင်တယ်ဆိုရင်………………………………………